EBEE KA ARỤNYERE NATORRENT - UTORRENT - 2019
Mgbe mgbe, ndị ọrụ na-arụ ọrụ naTorrent, na-agbalị ịchọta folda ahụ e ji arụ ọrụ ya. Ihe kpatara nke a nwere ike ịdị iche: site na ịchọ nhazi faịlụ maka iwepụ akwụkwọ ntuziaka.
Emere nsụgharị nsụgharị nke uTorrent na nchekwa "Faịlụ mmemme" na usoro diski. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị onye ahịa karịa 3, lee anya n'ebe ahụ.
Njikwa nhazi nke a dị na ụzọ C: Ndị ọrụ na akaụntụ AppData gị.
A na-arụcha nsụgharị ọhụrụ ahụ na ụzọ ahụ dị n'elu.
A obere ndụ mbanye anataghị ikike site na-ede akwụkwọ. Ka ịchọta ebe ebe usoro ihe omume ahụ dị (na ọnọdụ anyị, uTorrent), pịa aka nri na ụzọ mkpirisi wee họrọ Ebe Njikwa. A nchekwa na ngwa arụnyere ga-emepe.
Ọzọkwa, ọnọdụ faịlụ na-egosipụta na ngwá ọrụ ngwá ọrụ mgbe ị na-agafe n'ụzọ dị mkpirikpi.
Ugbu a, ị maara ebe ị ga-ahụ folda ahụ na onye na-ahụ maka ịnweta ike.